Vaovao - Aza atao ambanin-javatra ny diôdiôma titanium ao anaty fonony
1. Ny andraikitry ny diôdiôma titanium amin'ny famonoana
Ny palitao dia ahitana ampahany efatra: akora mpamorona sarimihetsika, loko, solvents ary additives. Ny pigment amin'ny fonosana dia manana hery miafina. Tsy afaka manarona ny loko am-boalohany an'ilay zavatra mifono izy io, fa manome loko mamirapiratra ihany koa ny firakotra. Fantaro ny vokatr'ireo haingon-trano sy ny hatsaran-tarehy. Mandritra izany fotoana izany, ny loko dia mitambatra akaiky amin'ny mpitsabo mpanasitrana sy ny substrate, ary mifangaro, dia afaka manatsara ny herin'ny mekanika sy ny firaiketan'ilay sarimihetsika manarona, manakana ny famakiana na ny fianjerany, ary afaka mampitombo ny hatevin'ny sarimihetsika mifono, misoroka ny fidirana amin'ny taratra ultraviolet na hamandoana, ary manatsara ny coating. Ny fananana manohitra ny fahanterana sy maharitra ny horonantsary dia manitatra ny androm-piainan'ny sarimihetsika sy ilay zavatra voaaro.
Ao amin'ny pigment, ny haben'ny pigment fotsy dia lehibe dia lehibe, ary ny fepetra takiana amin'ny coating amin'ny loko fotsy: ①Fotsy fotsy; ②Ny fikosehana tsara sy ny fahamendrehana; ③Fanoherana ny toetr'andro tsara; StabilityMiorina tsara ny simika; ⑤Mba haben'ny potika kely, hery afenina sy fatiantoka Herin'ny loko ambony, opacity ary gloss tsara.
Titanium dioxide dia karazana loko fotsy izay be mpampiasa amin'ny firakotra. Ny vokatra avoakany dia mitentina 70% mahery amin'ny pigment anorganika, ary ny fanjifany dia 95,5% amin'ny totalin'ny pigment fotsy. Amin'izao fotoana izao, manodidina ny 60% amin'ny diôdiôma titanium manerantany no ampiasaina hanamboarana fonosana isan-karazany, indrindra fa dioxide titanium rutile, izay ny ankamaroan'izy ireo dia lanin'ny orinasan-tsarimihetsika. Ny loko vita amin'ny diôdiôma titanium dia misy loko mamirapiratra, hery miafina avo, hery tinting mahery, fatra ambany ary karazany maro. Izy io dia miaro ny fitoniana amin'ny salantsalany ary afaka manatsara ny herin'ny mekanika sy ny firaiketan'ilay sarimihetsika hosodoko, manakana ny triatra ary misoroka ny taratra ultraviolet. Mitsofoka anaty rano izy io ary manalava ny sarin'ny sary hosodoko. Ny lokon'ny loko saika amin'ny loko rehetra dia tsy azo sarahina amin'ny diôdiôma titanium.
Ny karazana palitao isan-karazany amin'ny tanjona samihafa dia misy fepetra takiana amin'ny diôdiôma titanium. Ohatra, ny fonosana vovoka dia mitaky fampiasana dioxide titanium rutile miaraka amin'ny fanaparitahana tsara. Ny dioxide titanium anatase dia manana hery mandoro ambany sy fiasa mahery vaika. Rehefa ampiasaina amin'ny fonosana vovoka dia mora mavo ny sary mihetsika. Ny dioxide titanium rutile novokarin'ny fomba asidra solifara dia manana tombony amin'ny vidiny antonony, fanaparitahana tsara, hery miafina tsara ary hery mampihena ny loko, ary tena mety amin'ny firakotra vovoka anaty trano. Ankoatry ny fanaparitahana tsara, ny hery afenina sy ny hery mampihena ny loko, ny diôdiôma titanium ho an'ny fametahana vovoka ivelany dia mitaky toetr'andro tsara ihany koa. Noho izany, ny vovo-titane ho an'ny fonosana vovoka ivelany dia matetika dioxide titanium rutile novokarin'ny chlorination.
2. Fanadihadiana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny kalitaon'ny diônôzônia amin'ny kalitao
Titanium dioxide dia ampiasaina ho toy ny loko fotsy ho an'ny fonosana. Ny fahadiovany dia tena zava-dehibe ary iray amin'ireo famantarana kalitao ilaina amin'ny takelaka. Ny fotsifotsy dioxide titanium tsy mahomby dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fisehoan'ny sarimihetsika sarimihetsika. Ny antony lehibe manohina ny fotsifan'ny diôdiôma titanium dia ny karazany sy ny atin'ny fahalotoana manimba, satria ny diôdiôma titane dia tena mora tohina amin'ny loto, indrindra fa ny diôdiômanôzy titanium.
Noho izany, na dia loto kely aza dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fotsifan'ny diôdiôma titanium. Ny fotsifan'ny diôdiôma titanium vokarin'ny fizotran'ny klôroôra dia matetika tsara kokoa noho ny vokarin'ny fizotran'ny asidra solifara. Izany dia satria ny tetrachloride titanium vita amin'ny akora ampiasaina amin'ny famokarana titanium dioxide amin'ny alàlan'ny fizotran'ny klôroida dia kely ary ny atin'ny fahalotoany manokana dia kely kokoa, raha ny fizotran'ny asidra solifara no mampiasa ireo akora fototra dia misy atiny maloto ambony, izay tsy afaka afa-tsy esorina amin'ny teknika fanasan-damba sy fanadiovana.
Fahefana miafina 2
Ny fahefana miafina dia ny velaran'ny faritra misy ilay zavatra mifono isaky ny centimetatra toradroa. Rehefa rakotra tanteraka izy dia hosodoko ilay faritra iray ihany. Arakaraka ny maha lehibe ny hery miafina an'ny diôdiôma titanium no ampiasainy dia mihakely ny sarimihetsika manarona ary mihena ny habetsaky ny loko ilaina, ny kely kokoa amin'ny dioxide titanium ilaina, raha mihena ny hery miafina an'ny diôdiôma titanium, mba hahatratra ny vokany mandrakotra, ny habetsaky ny diôdiôma titanium ilaina mitombo, ny vidin'ny famokarana dia hitombo, ary ny fitomboan'ny dioxide titanium dia hiteraka dioxide titanium ao anaty fonosana. Sarotra ny manaparitaka fanamiana, ary misy ny fanangonana izay hanao misy vokany eo amin'ny vokatry ny firakotra.
Fanoherana ny toetr'andro 3
ny palitao dia mitaky fanoherana ny toetr'andro avo an'ny diôdôniônôma, indrindra ho an'ny firakotra ivelany, izay mitaky fanoherana ny toetrandro avo na fanoherana toetr'andro avo. Amin'ny fampiasana dioxide titanium miaraka amin'ny fanoherana ny toetr'andro ambany, ny sarimihetsika manarona dia hanana olana toy ny fading, discoloration, chalking, cracking, ary peeling. Ny firafitry ny diôdiônôma titanium de rutile dia henjana kokoa noho ny diôdiôtôzy titanium anatase, ary ambany ny asan'ny fotony. Noho izany, ny fanoherana ny toetrandro dia avo kokoa noho ny diôdiôtônia titanium anatase. Noho izany, ny diôdiôma titanium ampiasaina amin'ny firakotra dia dioxide titanium rutile amin'ny ankapobeny. Ny fomba lehibe hanatsarana ny fanoherana ny toetr'andro amin'ny diônôdiôma titanium dia ny fanaovana ny fitsaboana an-tany tsy voajanahary, izany hoe ny manisy kozida ôksidima anorganika na oksida hydrated eo ambonin'ny poti-diôtôkôma titanium.
Titanium dioxide dia sombina ultra-fine miaraka amin'ny velarantany lehibe sy angovo avo lenta. Mora ny manangona eo anelanelan'ny sombintsombiny ary sarotra ny manaparitaka azy ireo amin'ny fonosana. Ny fanaparitahana dioxide titanium tsy mahomby dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fananana optique toy ny fihenan'ny lokony, ny hery afenina ary ny famirapiratra ao anaty fonosana ary koa misy fiatraikany amin'ny fitoniana fitehirizana, ny fahamendrehana, ny haavo, ny faharetan'ny firakotra ary ny fanoherana ny harafesin'ny fonosana. Ny fananana fampiharana toy ny fitondra herinaratra sy ny fitaritana herinaratra dia hisy fiantraikany amin'ny vidin'ny famonosana, satria avo lenta ny fampiasana angovo amin'ny fikosoham-bary sy fanaparitahana, mitaky ny ankamaroan'ny fanjifana angovo amin'ny fizotry ny famokarana, ary ny fahaverezan'ny fitaovana dia lehibe. .
Ny fangatahana dioxide titanium dia nitombo tamin'ity taona ity, indrindra ho an'ny dioxide titanium ampiasaina amin'ny indostrian'ny fiaramanidina lithium-ion, izay mbola mila miankina amin'ny fanafarana. Amin'ny maha-idiran'ny diôdiôzy titanika azy ireo, dia voakasiky ny tafiotra amin'ny tontolo iainana ny firakotra, ary orinasa marobe sy salantsalany no nikatona. Amin'ny ho avy, ny habetsaky ny diôdiôma titanium ao amin'ny tsenan'ny coatings dia hihena ihany koa.